Colour Care Business Group Co.,Ltd မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ | MyJobs
/ Colour Care Business Group Co.,Ltd မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ | MyJobs
Factory Manager Male (1)Post
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ fdf
Develop and implement daily, weekly and monthly production plan to meet production order by quantity and standard product quality timely. - To develop and implement innovative strategies to streamline factory operation. - Ensuring that factory machinery is in good working instructions.
Develop and implement daily, weekly and monthly production plan to meet production order by quan ...
National Sales Manager Male (1) Post
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ fdf
Review operational records and reports to project sales and determine profitability. Plan and direct staffing, training and performance evaluation to develop and control sales and services programs. Determine price schedules and discount rates. Monitor customers preferences to determine the focus of sales eff ...
Review operational records and reports to project sales and determine profitability. Pl ...
အကြောင်း Colour Care Business Group Co.,Ltd
Colour Care Business Group Co.,Ltd မှထုပ်လုပ်သော Mr Snack အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ရှမ်း တို့ဟူးခြောက်ကြော် (အချို ၊ အစပ်) စာကလေးအချောင်းကြော် (အချို ၊အစပ်) မုန့်သြဇာ တို့ကို ကုလားပဲစစ်စစ် တို့အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားပြီး Bita Snack အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ပြောင်းကိုအခြေခံကာ ပုဇွန်စစ်စစ်အရသာဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးသန့်ရှင်းလက်ဆတ်စွာထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန် ၊ မန ္တလေး ၊ နေပြည်တော် ၊ မော်လေမြိုင်၊ ဖားအံ ၊ လားရှိုး ၊ လွိုင်ကော် ၊ မြစ်ကြီးနား ၊ ပုသိမ် ၊ မကွေး ၊ မုံရွာ မြို့ကြီးများရှိအရောင်းဆိုင်ကြီးများမှ တဆင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။